कारोबारको पहिलो साता नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलमेण्ट बैंकको मूल्यमा सकारात्मक वृद्धि, बजार पूँजीकरण १ खर्ब नाघ्यो
फागुन ६, काठमाडौं । यो साताको पहिलो दिन आइतवारदेखि कारोबार शुरु भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य साताको पाँचै दिन बढेको छ ।
पहिलो कारोबार रू. ३४० मा खुला भएको कम्पनीको अन्तिम मूल्य पाँचौ कारोबार दिनमा रू. ५४६ पुगेको हो । पाँच ओटा कारोबार दिनले कम्पनीको शेयरमूल्यमा रू. २०६ ले बढाएको हो ।
कारोबारको चौथो दिन सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको उक्त कम्पनीको पाँचौ दिन सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्नेमध्य दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । बुधवार रू. ६९ करोड ४३ लाखभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री भएको कम्पनीको बिहीवार रू. ५० करोड ८२ लाखभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ ।
२० करोड कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण रू. १ खर्ब ९ अर्ब २० करोड पुगेको छ । उक्त कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस शेयर दिने योजना सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्दै बनाएको छ ।
देशभित्र र बाहिरबाट लगानीको दिर्घकालिन स्रोत संकलन गरी देशको पूर्वाधार विकासका परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने उदेश्यसहित उक्त कम्पनीको स्थापना भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७५ साल माघ २८ गते राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा काम गर्ने स्वीकृति पाएको कम्पनीले विसं २०७५ फागुन २२ गतेदेखिनै औपचारिक रुपमा बैंकिङ व्यवसाय सुरु गरेको हो ।उक्त कम्पनी नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंक हो । यस कम्पनीमा नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको छ ।
निफ्राको यो साताको कारोबार अवस्था :
शहीद स्मृतिमा पार्क निर्माण